Aluminum ụba TV
Plastic ụba TV
N'obi Glass TV
Kọmputa Black Board
Aghọ ihe gị n'ụlọnga
Guangdong Asano Technology Co., Ltd., na n'elu 100,000m² n'ala ebe, emi odude ke otu n'ime ndị kasị ngwa ngwa na-emepe emepe na mpaghara na oge a na ụlọ ọrụ na China, bụ ihe integrated elu-tech enterprise aku nnyocha, imewe, mmepe, mmepụta, na ahịa nke agba telivishọn, azụmahịa ngosipụta na ndị ọzọ na ọkụ ngwa.
Anyị nwere ihe karịrị 1500 ọrụ, gụnyere 15 ọrụ na-ejide dọkịta degrees, 20 ọrụ nwe degrees, banyere 50 injinia na ihe karịrị 300 ọrụ gụsịrị akwụkwọ na mahadum.
Anyị isi ngwaahịa nso ekpuchi agba TV Chassis, TV cabinets, zuru TV tent, azụmahịa ngosipụta gụnyere smart aka ogwe, digital signages, video mgbidi na ndị ọzọ yiri CKD na SKD mmiri.
Onwem na iri puku kwuru iri nke elu akpaka nzukọ edoghi na-akwado site na akpaaka inserting igwe, na akpaaka ịgba-agba mmepụta edoghi, mgbaàmà na-akpali akpali igwe na zuru usoro, zuru ezu oru ule ngwá na ndị ọzọ karịa 30 plastic injection igwe, anyị na-enwe kwa afọ mmepụta ike nke 5.000.000 agba telivishọn na ndị ọzọ mmiri sitere na nha site 10 ruo 85 sentimita asatọ.
Anyị na ngwaahịa a na-ere ihe karịrị 110 mba na mpaghara. Ebe gafere ISO9001 mma, CCC ihu ọma, na ndị ọzọ na mba nkwado dị otú ahụ dị ka CB, OA, SAA wdg, na kụziri site na anyị onwe anyị gbaara mba pụrụ ịdabere laabu na 40 mba Ikike nchọpụta Kemịkalụ, anyị QC ngalaba ana achi achi na ihe niile anyị na ihe na okokụre ngwaahịa ụfọdụ ruo anyị tiri ụkpụrụ.
Gbara ajụjụ banyere anyị na ngwaahịa ma ọ bụ price list. Biko ahapụ gị email na anyị ga-kpọtụrụ gị n'ime 24 awa.
32 Inch Dugara TV , Windows, Smart Home Touch Panel, Smart TV Touch Panel ,